यदि बागवानीको असाधारण प्रभावकारी प्रतिनिधिको साथ बगैचालाई सजावट गर्ने इच्छा छ, सम्भवतः यो भूमिका बगैचा azale भन्दा राम्रो यो रोज्न गाह्रो छ। लुका फूल बनाउने सुन्दर झाडी कुनै पनि साइटको इच्छित अतिथि बनाउँछ।
सुन्दर azalea बगैचा - वर्णन र प्रकारहरू
Azalea rhododendrons को एक विशेष उपसमूह मा अलग छ। यो सबै भन्दा पहिला, झाडी, जसको उचाइ 50 सेन्टिमिटरसम्म फरक हुन्छ। शाखा गोलीहरू चमकदार हुन्छन्, जस्तै पोर्टेबल, एल्पिसको रूपमा पत्तिन्छ। Azalea झाडको बगैचाको मुख्य सम्पत्ति फुलफुलको रूपमा वा फ्लैट आकारको साथ कल्याणबाट रंगीन फूल हो। रंग सबैभन्दा विविध हुन सक्छ: सज्जन नीलो र गुलाबीको विभिन्न आकारहरू, र अमीर पहेँलो, लाल, लाल।
Azalea मा धेरै प्रजातिहरू छन्। प्रायजसो हाम्रो देशमा बगैचा बेइलाली जापानी हुँदै जान्छ। यो प्रायः मुकुटको साथ सदाबहार स्रब हो। मूलतः पूर्वी पूर्वी भूमिबाट, झाडी आधा मीटरको व्यासमा पुग्छ, र उचाई 120 सेन्टिमिटर सम्म हुन्छ। मई मा उनको फूल रङको एक वास्तविक छुट्टी र कल्याण प्रशस्त हुन्छ। जापानी सदाबहार azaleas बीच, त्यहाँ दुई उपसमूहहरू - कुरुम र डेकको हाइब्रिड।
काल्पनिक azaleas उत्कृष्ट ठंढ प्रतिरोध द्वारा प्रतिष्ठित छन्, जसको परिणामस्वरूप तिनीहरू अक्सर कार्लिया र Leningrad क्षेत्र को कठोर परिस्थितियों मा उगाइन्छ। तिनीहरूको विशिष्ट विशेषता, शरद ऋतुमा पतित पातहरू बाहेक, 8 सेन्टीमिटरसम्म विश्वव्यापी प्रोस्कोसेन्सिसहरूसँग एकचोटी ब्लीज हो।
Azalea बगैचा - लैंडिंग
वनस्पति को यो उज्ज्वल प्रतिनिधि छोडने को बारे मा पिकसी छ। सुरुमा, पर्याप्त वृद्धिको लागि, श्रबहरूको लागि उपयुक्त स्थान छान्नु महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ आवश्यक छ कि मिट्टी को गुणवत्ता र साइट को सामान्य रोशनी को रूप मा यस कारक को ध्यान मा राखन को लागि। एक जापानी प्रजाति प्रजातिको लागि, उपयुक्त क्षेत्रहरु राम्रो प्रकाश संग, तर सीधा सूरजमुखी बिना। घृणित श्रब, यसको विपरीत, अधिक प्रकाश मनपर्छ।
यदि हामी माटोको बारेमा कुरा गर्छौं, त्यसपछि अजेलिया बगैचाले एसिड प्रतिक्रियाको साथ प्रजनन मिट्टीको आवश्यकता पर्दछ। भारी माटो मिट्टीमा, azalea खराब हुन्छ।
रोपण गर्नुअघि, एक छेद गहिराइमा आधा एक मिटरसम्म खोल्नुहोस्, त्यसपछि तलतिर विस्तारित माटो वा टूटी ईटाको ड्रेनेज तह राखिएको छ र त्यसपछि मिश्रणलाई अम्ल प्रतिक्रिया र स्पग्नामसँग खरिद गरिएको मिट्टीबाट फैलाउनुहोस्। रोपण पछि, बिरुवाहरू पोषित हुन्छन् र अधिमानतः मुलाकात गरिन्छ।
बगैचा azalea को हेरविचार गर्नुहोस्
शायद azalea को ध्यान मा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिंचाई शासन संग अनुपालन हो। माटो ओभरराइड झाडका लागि खतरनाक छ, यसबाट तिनीहरू नष्ट हुन्छ। एकै समयमा, अतिप्रवाह शानदार पौधहरूको लागि कम हानिकारक छैन। यसैले अजेलको पानीलाई जब पानी सुक्ने छैन भनेर प्रयास गर्नुहोस्। यदि झाडी प्रवाह चरणमा छैन, यो खडा पानीसँग स्प्रेड गर्न सकिन्छ। सिंचाई पछि, यो पनि पाइन शाखाहरु संग मल्ल गर्न सिफारिस गरिन्छ। अजलील बगैचाले उर्वरकरणको लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ। 20 दिनमा रोपण पछि, बिरुवाहरू नाइट्रोजन उर्वरकसँग त्रिएका छन्, र झाडी fades पछि, फास्फेट पोटेशियम । भविष्यमा, तपाईले हरेक दुई देखि तीन हप्ताको जटिल उर्वरक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पानी दिन पछि, झाडीको माटोलाई कम गर्न आवश्यक छ, ताकि नमी को ठुलो कारण नगर्नु, बगैचा बगैचा को जला प्रणाली azale को घुमाउछ।
यसको अतिरिक्त, azalea को हेरचाह pruning समावेश गर्दछ। बनावट वयस्क वयस्कहरूको लागि मात्र आवश्यक छ। यो फूल लगाउनु पछि गरिन्छ, शाखाहरू टाँस्ने जो झाडी हाल्छ। शाखाहरु को जहरीला रस संग छाला को जलाने को लागि आफ्नो हातहरुमा दस्ताने राखन नबिर्सनुहोस्।
यस तथ्यको बावजूद बगैचा azale फ्रस्ट-कडा छ, झाडीहरू जाडोको लागि तयारी चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिला, लचिलो गोलीहरू जमीनमा बाक्लो छन् र बर्फसँग जोडिएको निश्चित। दोस्रो, जडहरू अतिरिक्त सतहको तह वा चिसो वा सुत्ने पातहरूसँग ढाकिएको छ।
गुलाबी अंगूर किस्महरू
पानी प्याज कसरी गर्ने?
अङ्ग्रेजीको रक्सीको लागि अंग
टी-हाइब्रिड गुलाब "ग्लोरिया डे"
बगैचामा काठबाट छुटकारा पाउन कसरी?
हाउथर्न - रोपण र हेरविचार
Philodendron - गृह हेरचाह
एक खर्बको रूपमा पतन पातहरू
घरमा एउटा सुर्खेत कसरी पानी पिउने?
बिरुवामा पेनीनियम रोपण गर्दा?
लसुनको बल्ब बसाल्दा कहिले?
सरदर को रूप मा
इनडोर बिरुवाहरूका लागि अभिनेता
लिवर बढाव - लक्षण
राजकुमारी Evgenia Instagram मा अप्रत्याशित फोटोहरूसँग ग्राहकहरू कृपया जारी राख्नुहुन्छ
गुमको डोमको मस्जिद
2015 मा सबै भन्दा फैशनेबल बालकोट
बुना भयो स्वेटर
कपडाबाट ग्लु कसरी हटाउनुहुन्छ?
ग्रीष्मकालीन कटेजहरु को लागि पनीर फूल - कुन किसिमको फूल फूलको लागि छनौट राम्रो छ?
ईर्ष्या - घर मा कारण र उपचार
ब्लगर चीरा फरानजीजीले स्वीकार गरे कि त्यो चाँडै आमा बन्छ
पिज्जाको लागि क्रिस आटा
आत्मा कसरी शान्त पार्नु हुन्छ?
पलियोपियन ट्यूब र गर्भावस्थाको रोकथाम
फ्याक्स 2013 बाट स्कर्ट
मीठा - नुस्खा
पतली हुन कसरी?
काँचको लागि कास्ट ओवन कास्ट गर्नुहोस्
चीकेबोन घटाउँदछ - कारणहरू